Fintim-baovao - SmartMe
Dom » Fintim-baovao
Amin'ny alàlan'ny famandrihana ny takelaka, manaiky ny fanodinana ny angon-drakiko manokana aho amin'ny fampiharana ny serivisy, misy fampahalalana momba ireo hetsika ankehitriny ataon'ny Administrator, araka ny hevitra faha-6. 1a GDPR.
Mifanaraka amin'ny zavakanto. 13 fizarana 1 sy ny entana 2 ny Fitsipika ankapobeny momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana ny 27 aprily 2016. Ampahafantariko hoe:
1. Ny mpandrindra ny data-nao dia i Ariel Zgórski, izay mitantana ny orinasa SmartMe Ariel Zgórski miaraka amin'ny birao fisoratana anarana ao Katowice, ul. St. Jana 11/4, NIP: 6482751882, REGON: 384481312.
2. Ny angon-drakinao manokana izay zahana dia novidiana mba hanomezana ny serivisy fampahalalam-baovao misy fampahalalana momba ny hetsika ankehitriny an'ny Administrator, araka ny teboka 6 1a GDPR.
3. Ny mpahazo ny angon-drakitrao manokana dia olona omen'ny Administrator, sampandraharaha nahazo alalana mifanaraka amin'ny fepetra ara-dalàna, ary ireo fikambanana ivelany eo ambany fifanarahana nosoniavina.
4. Ny angon-drakitrao manokana dia hotehirizina mandra-pahatongany ny fanekena ny famoahana azy.
5. Ny angon-drakitrao manokana dia tsy hafindra any amin'ireo firenena fahatelo ho ampahany amin'ny tanjon'ny fanodinana.
6. Manan-jo hiditra amin'ny angon-drakitrao ianao, manan-jo hanitsy azy io, hamafa azy, hametra ny fikarakarana, ny zon'ny famindrana angona, ny zon'ny hanohitra, ny zo hanala ny fanekena amin'ny fotoana rehetra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny maha-ara-dalàna ny fanodinana, izay natao tamin'ny alàlan'ny fanekena teo aloha ny fisintomany.
7. Manan-jo hanao fitarainana amin'ny vondron'ny mpanara-maso ianao raha mahatsapa fa mandika ny fepetra napetraky ny fitsipika ankapobeny momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana ny 27 aprily 2016.
8. An-tsitrapo ny fanomezana ny angon-drakitrao manokana.
9. Ny angon-drakitrao manokana dia tsy iharan'ny fandraisana fanapahan-kevitra automatique na profiling.